Ukuqonda UKristu | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
72 amaqiniso 54 Amavidiyo ahambisanayo
1. Umuntu angawazi kanjani umongo wobunkulunkulu bukaKristu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “uJesu wathi kuye, Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila: akekho oza kuBaba, ngaphandle kwami. Uma beningazi mina, beniyakuma…
2. Ingabe uKristu ngempela uyiNdodana kaNkulunkulu noma Yena Uqobo unguNkulunkulu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “UFiliphu wathi kuye, Nkosi, sibonise uYihlo, futhi kusanele. UJesu wathi kuye, Isikhathi esingaka ngik…
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ningabakayihlo udeveli, futhi niyokwenza izinkanuko zikayihlo. Wayengumbulali kwasekuqaleni, futhi akazange ahlale eqinisweni, ngoba iqiniso lingekho kuye. Lapho ekhuluma amanga, ukhulum…